प्रभु इन्सुरेन्सले १९ लाख २५ हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन, कुन ठाउँबाट फारम भर्ने ?
ARCHIVE, CORPORATE » प्रभु इन्सुरेन्सले १९ लाख २५ हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन, कुन ठाउँबाट फारम भर्ने ?
काठमाडौं - चैत्र ३० (आज) देखि प्रभु इन्सुरेन्सले ५०% हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ । प्रभुले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ दरको १९ लाख २५ हजार ७८.८१ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न थालेकोे हो । प्रभुको २ः१ अनुपातको यस हकप्रद सेयरमा जेठ २ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने छ । यस हकप्रदमा चैत ५ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् ।
प्रभुको बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड हो । प्रभु इन्सुरेन्सले प्रभु क्यापिटल लिमिटेड कमलादी काठमाडौं र प्रभु बैंक लिमिटेडका विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल, धनगढी, पोखरा र बनेपा शाखाबाट आवेदन फारम लिन र बुझाउन सकिने व्यवस्था छ ।